आ.व. २०७८।७९ को बजेटका लागि संघीय सरकार क्रियाशील छ । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विविध पक्ष र क्षेत्रबाट सुझाव दिने क्रम जारी छ । यसै सन्दर्भ पारेर यस आलेखमार्फत मैले पनि आगामी बजेटका लागि केही रचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु ।
आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रः
​नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानका लागि पनि कम्तिमा हामी ५ कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यसमा पहिलो खाद्यान्न हो । दोस्रो हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । तेस्रो, फलफूलमा हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यसैगरी, चौथो, दुग्ध पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । पाँचौं, मासुजन्य वस्तुमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । मुख्य कुरा, कृषिजन्य उत्पादन र खाद्य वस्तुको करीब रु २ खर्बको पैठारी प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । मिसन खेतीका लागि वर्तमान कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर गर्नुपर्छ ।
यर्सागुम्बा लगायतका बहुमूल्य जडिबुटीहरूको व्यावसायिक कारोवारबाट नेपाललाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउनु पर्छ । जटामसी, पाँचऔंले, कुटकी लगायतका जडिबुटीको विश्व बजारमा उच्च माग छ, त्यसको निकासी बढाउनुपर्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको मौरीको महलाई विश्व बजारमा औषधिको रूपमा बिक्री गर्नुपर्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा चरन क्षेत्र विकास गरी त्यहाँ जडिबुटीको घाँस खाने मासुजन्य जनावरको स्लटर हाउस खोली उच्च मूल्यमा मासु निकासी गर्नुपर्छ । यसका निमित्त पीपीपीको मोडल उपयुक्त हुन सक्छ । यसर्थ, जडिबुटीको विकासका लागि विशेष उच्चस्तरीय संयन्त्र नै खडा गरी एकीकृत प्रयास गर्नुपर्छ ।
हस्तकलाका उत्पादन वृद्धि:
देसेमरु झ्याः जस्ता काष्ठकला, पौवा र भोजपत्रको विश्व बजारमा अत्यधिक माग छ, तिनको उत्पादन र निकासी बढाउनु पर्छ ।
नेपाली घण्टी, थैली, बाँसुरी, करुवा, अण्टी, नेपाली कागजका सामग्री र नक्कली सुनका गहनाका लागि नेपाल विश्व बजारमा प्रख्यात छ । यसैगरी, नेपाली कागजका विविध सामग्रीका लागि पनि नेपाल विख्यात छ । यिनको निकासी बढाउनु पर्छ । चाँदी र तामाका भाँडाकुडा र गहनाको पनि विश्वबजार छ । यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसको निकासीबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।
साहसिक खेलको विकास:
भोटेकोसी र त्रिशुलीमा र्‍याफ्टिङको स्वाद लिने पर्यटकको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । हालको कोभिडको संक्रमणको बखत अपवादको अवस्था हो । यसलाई थप नदीमा विस्तार र बजारीकरण गर्नुपर्छ ।
नेपालका विशाल र रमणीय खोंचमा बञ्जी जम्पिङ फस्टाउदो अवस्थामा छ । यस अतिरिक्त नेपालका विभिन्न रमणीय डाँडामा प्याराग्लाइडिङले पर्यटकलाई आकर्षित गरेका छन् । यसको थप विकास गर्नु पर्छ ।
यसै सन्दर्भमा रोमाञ्चकारी पदयात्रा र रक क्लाइमिङ पनि नेपालमा फष्टाउँदो छ । यसमा पनि जोड दिनुपर्छ । यस क्षेत्रमा बजेटले लगानी बढाउने र लगानी आकर्षित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
प्राविधिक शिक्षामा जोड:
हाल नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारी समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । एक प्रकारले स्कूल र कलेज शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानासरह भएका छन् । यसर्थ, टेन प्लस टूमा डिस्टिङ्गसन वा ८० भन्दा बढी अंक ल्याएकाले मात्रै हालको सामाजिक विज्ञानका विषय पढ्न पाउने र अरू सबैले अनिवार्यरूपमा प्राविधिक विषय पढ्ने/पढाउने मेगा प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्छ ।
यसबाट उच्च गुणस्तरका इञ्जिनियर, ठेकेदार, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, ब्यूटिसियन, सैलुनकर्मी, सञ्चारकर्मी, कलाकार, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई विज्ञ, शिक्षा विज्ञ, वन र वन्यजन्तु संरक्षण विज्ञ लगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि हालका सबै क्याम्पसलाई एक प्रकारले पोलिटेक्निक संस्थामा रूपान्तरित गर्न र यसमा बहस केन्द्रित गर्न विद्वानवर्गमा आग्रह गर्दछु ।
हिउँ र माटोको गिफ्ट बनाऔं:
सगरमाथाको टाकुराको हिउँलाई विशेष बट्टामा सिलप्याक गरी उपहारको सामग्रीको रूपमा विश्व बजारमा बिक्री गर्नु पर्छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्ने केबलकार जडान गर्नु पर्छ । साथै हेलिकोप्टरबाट सटल सर्भिस सञ्चालन गर्नु पर्छ । साथै सगरमाथाको आधार शिविर आसपासका झरनाका पानीलाई प्रशोधन गरी बोटलिङ गरी विश्वभरी बिक्री गर्नुपर्छ । यसको ठूलो बजार हुनेछ ।
जुन मुलुकमा जे छ, सोही वस्तुलाई ब्रान्डिङ गर्ने नै हो, तर त्यसको पवित्रता जोगाएर । यस अनुरूप, विश्वका कम्तिमा २ अर्ब बुद्ध धर्मावलम्बीलाई बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीमा भ्रमण गराउने लक्ष्य लिनु पर्छ ।
यसका लागि विश्वमा रहेका बुद्धधर्मका नामुद धर्मगुरूहरूलाई सरकारी खर्चमा नेपालको भ्रमण गराई उनीहरूलाई मान सम्मान दिनु पर्छ ।
साथै, भगवान बुद्धको जन्मस्थलको एकचिम्टी माटोलाई पारदर्शीढंगले सुन वा चादीको लकेट बनाई विश्वभरि विशेष उपहारको रूपमा तयार गर्न सकिन्छ । यस्को मूल्य आंकलन गर्न सकिन्न, तर हायन्डिल विद केयरसँग अगाडि बढेमा अनुमान नै नगरेको लाभ लिन सकिन्छ ।
बुढीगण्डकीमा सरकारी लगानी:
गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट १२ सय मे.वा. विद्युत शक्ति उत्पादन हुनेछ । यसमा प्राकृतिक बाँध बनाइनेछ, जो संसारका उत्कृष्ट १० बाँधमध्येमा पर्नेछ । यसमा ताल बनेर पानी जम्दा पोखराको फेवातालभन्दा बीस तीस गुणा ठूलो तालमा नौका बिहार गर्न सकिनेछ । तालको वरिपरि मनमोहक शहर बस्नेछ ।
करीब रु २५० अर्बको लागतमा करीब ८ वर्षमा यो योजना पूरा हुनेछ । सन् २०३० सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि ५ हजार अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिन्छ । यसबाट हामी मध्यम आय भएको मुलुकको पंक्तिमा पर्नेछौं । यसका लागि पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सर्वाधिक ‘हटकेक’ ठहरिएको छ ।
यसर्थ संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष रु २५ देखि ४० अर्ब बजेट विनियोजन गरी सो बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था गरेमा सहजै यो मेगा प्रोजेक्ट सफल हुने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसमा थप माथापच्चीको जरुरत छैन । तर, हाल यो आयोजनाका लागि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको कर भने यथावत राख्नु पर्छ ।
रसायनिक मल कारखाना:
नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । यसर्थ यहाँ एउटा रसायनिक मल कारखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि करीब १०० मे. वा. विद्युत शक्ति आवश्यक पर्न सक्छ । साथै, सातैवटा प्रदेशमा ७ वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । अनि, एउटा कृषि औजार कारखाना पनि स्थापना गर्नुपर्छ ।
नेपालको कूल भू–भागको ४६ प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर कूलगर्हस्थ्य उत्पादनमा वनको योगदान केबल ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसर्थ, उमेर पुगेका रुख काटेर नयाँ रुख लगाउनु पर्छ । रुखमा हाँगा काटेर त्यसलाई मेशिनले पेलेर पिठो बनाई सो पिठोबाट फल्याक र फर्निचरका सामाग्री उत्पादन गर्नुपर्छ । करीब ११ प्रतिशत नाङ्गो वन बुट्यान क्षेत्रमा सजिवन लगायतको खेती गरी लाभ लिनु पर्छ ।
वनलाई यथावत राखी जमिनमुनि फल्ने आलु, अदुवा, बेसार, पिँडालु, सखरखण्ड, तरुल लगायत उत्पादन गर्नु पर्छ । यसैगरी, वनको प्रकृति हेरी लहरे तरकारीअन्तर्गत फर्सी, स्कूस, घिरौँला, काँक्रो, सिमी लगायत उत्पादन गरी जाम उद्योग लगायत सञ्चालन गर्नुपर्छ । वनलाई विस्तारै फलफूलमा रुपान्तरित गरी बेल, गुराँस, लगायतको जुस र ऐँसेलु, काफल, किम्बूको उत्पादन बढाउनु पर्छ ।
यसैगरी, वनलाई असर नगर्ने गरी चिया, कफीको खेती, स्ट्रबेरी, अम्रिसो र जडिबुटीको उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै अग्ला वनमा गाईवस्तु र बाख्रापालन गरी लाभ लिन सकिन्छ । यसर्थ, वनको व्यावसायीकरण गर्ने एउटा मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालनको पहल गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कैयौँ स्थानमा ज्वालामुखी छन् । यो भनेको प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता हो । नेपालमा रहेको ढुङ्गा खानीबाट सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । यसका अलावा मार्बल उद्योग र म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा तामा खानी, फलाम खानी र कोइला खानी रहेको छ ।
यति मात्रै होइन हामीसँग युरेनियम पनि छ । नेपालमा पाइने गुणस्तरीय ढुंगाहरूलाई कटिङ गरी रुबी, स्टोन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, काठमाडौंमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको उपयोग गर्नुपर्छ ।
यसरी, आगामी बजेटमा यस्ता गेम चेञ्जर प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सुझाउन चाहन्छु ।